I Roost kwiFama yeHoliday
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKelli
IRoost yindlu enomoya evulekileyo enegumbi lokuhlala elikhulu/ikhitshi. Itheyibhile ekhethekileyo ye-barn-wood iyona nto iphambili kwindawo yekhitshi. Ungonwabela ikomityi yekofu okanye iti kwiveranda ngelixa uphumle ukumamela iintaka kunye nezandi zelizwe. Ebusuku uya kuthanda igumbi lokulala elipholileyo. Igumbi lokuhlambela elibanzi kunye neshawari enkulu enethayile yokuhamba iyamangalisa!
Ngaphandle kweefestile zegumbi lokuhlala unokubukela iinkukhu zisenza into yazo. Okanye phuma uye kwi-coop kwaye uhlale kancinci!
IRoost ikwifama yeehektare ezingama-20 apho usapho lwethu luhlala kwaye lusebenza kuyo. Uya kuba nokufikelela ukuhambahamba kwaye ujonge ifama kunye neendawo ezinemithi. Kukwakho nedama elineentlanzi ezininzi ukuba ufuna ukuloba emva kwemini, kwaye uzive ukhululekile ukuthatha ibhexa ujikeleze ichibi kwiphenyane lethu! Sityala izityalo zonyaka kwaye sikhulise neenkuku.
Gcina amehlo akho exolile ngenxa yendalo eninzi ngelixa uhlala apha. Uya kubona iintlobo ezininzi zeencukuthu, iintaka, ii-critter ezincinci, kunye nazo zonke iintlobo zezityalo onokuzonwabela! Usenokubona neentsapho ezimbalwa zamaxhama.
Uzosibona singabantu ngamaxesha athile kodwa sithe cwaka. Owu, kwaye kukho uloliwe ohamba ngamaxesha athile emva kwehlathi. Ayingxoli kakhulu kwaye awuyiboni.
I-HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Apple TV, I-Disney+, I-Fire TV, I-HBO Max, I-Hulu, I-Netflix, intambo yepremiyamu
Ukufikelela lula kwi-I75 & Hwy 25. 10 imizuzu ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Uziva ngathi uselizweni kodwa umgama nje oziikhilomitha ezimbalwa ukusuka eHamilton Place Mall.
Nceda uqhagamshelane nam nge-app ukuba ufuna nantoni na. Ndiza kwenza konke endinako ukunceda!